Ithegi: intengiso yeapps | Martech Zone
Ithegi: ukuthengisa usetyenziso lweselula
Izixhobo eziPhezulu zeVenkile yokuSebenzisa ezi-10 zokuphucula iNkqubo yoHlelo lweeNkqubo kwiiQonga leNkqubo eziDumileyo
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 2, 2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 2, 2021 Douglas Karr
Ngaphezulu kwezigidi ezi-2.87 zezicelo ezifumanekayo kwiVenkile yokuDlala ye-Android kunye nokusetyenziswa okungaphezulu kwesigidi esi-1.96 esifumaneka kwiVenkile yeApp ye-iOS, besingayi kubaxeka ukuba besinokuthi imakethi yeapps iya isiba ngokuxinana. Ngokusengqiqweni, usetyenziso lwakho alukhuphisani nolunye usetyenziso oluvela kukhuphiswano lwakho kwi-niche efanayo kodwa ngee -apps ezivela kuwo onke amacandelo entengiso kunye ne-niches. Ukuba ucinga, ufuna izinto ezimbini ukuze abasebenzisi bakho bagcine iiapps zabo- zabo
I-CleverTap: Uhlalutyo lweNtengiso yeFowuni kunye neQonga leCandelo
NgoLwesihlanu, ngoJuni 15, 2018 NgoLwesihlanu, ngoJuni 15, 2018 Douglas Karr
I-CleverTap yenza abathengisi abahambahambayo bahlalutye, bahlule, bahlanganyele kwaye balinganise iinzame zabo zokuthengisa. Iqonga lokuthengisa eliphathwayo lidibanisa ukuqonda okwenyani kwabathengi, isejini yokwahlulahlula phambili, kunye nezixhobo ezinamandla zokuzibandakanya kwiqonga elinye lokuthengisa, okwenza kube lula ukuqokelela, ukuhlalutya, kunye nokwenza izinto ngokuqonda kwabathengi kwii-millisecond. Kukho iinxalenye ezintlanu zeqonga leCleverTap: I-Dashboard apho unokwahlula khona abasebenzisi bakho ngokusekwe kwizenzo zabo nakwiipropathi zeprofayili, ukuqhuba imikhankaso ekujolise kuyo kwezi
Faka: Amanqaku okuzibandakanya e-Codeless Mobile App
NgoLwesine, Septemba 22, 2016 NgoLwesithathu, Septemba 28, 2016 Douglas Karr
Insert yenzelwe ukuba iphulo losetyenziso lweselfowuni linokwenziwa ngabathengisi ngaphandle kwesidingo sophuhliso lweapp. Iqonga linezinto ezininzi ezinokufakwa ngokulula, zihlaziywe kwaye zilawulwe. Uluhlu lweempawu zakhelwe abathengisi kunye namaqela emveliso ukwenza ukuba uhambo lomsebenzisi lubenakho, lubangele nanini na, lonyuse ukuzibandakanya, kwaye lilinganise kwaye lihlalutye ukusebenza kweapp. Iiapps zivela kwi-iOS nakwi-Android. Iimpawu zophukile
Ungalibala njani iXabiso loBomi loMsebenzisi weSoftware yakho
NgoMvulo, Agasti 22, 2016 NgoMvulo, Agasti 22, 2016 Douglas Karr
Sinezinto zokuqala, iinkampani ezimiselweyo, kunye ne-analytics kunye neenkampani ezinobunkunkqele eziza kuthi zifuna uncedo lokukhulisa ishishini labo kwi-Intanethi. Nokuba bungakanani na ubungakanani okanye ubucukubhede, xa sibuza malunga nexabiso labo lokufumana kunye nexabiso lokuphila (i-LTV) yomthengi, sihlala sidibana nembonakalo engenanto. Iinkampani ezininzi kakhulu zibala uhlahlo-lwabiwo mali ngokulula: Ngalo mbono, intengiso yomoya inyukela kwikholamu yeendleko. Kodwa ukuthengisa asiyondleko njengerente yakho… kunjalo
NgoMgqibelo, Oktobha 10, 2015 NgoMgqibelo, Oktobha 10, 2015 Douglas Karr
Kutshanje sabelane ngexabiso eliphezulu kunye nokwehluleka kwinqanaba lezicelo zeselfowuni, kodwa izibonelelo zesoftware elungileyo zikhulu kakhulu ukuba ungazihoyi. Kunye nocwangciso lokuba yinto ebaluleke kakhulu, amava eqela lophuhliso lweselfowuni kunye nokukhuthazwa kosetyenziso kubaluleke kakhulu. Insiza yakho inokunyuka iye phezulu kukhangelo lomntu wonke ukulawula imarike yeselfowuni. Phumeza iingcebiso kwi-infographic yeSikhokelo sokuKhuthaza
I-Localytics ibonelela ngenkonzo ye-analytics yesicelo sexesha elifanelekileyo kwi-iPhone, i-iPad, i-Android, iBlackBerry, iWindows Phone 7 kunye nokusetyenziswa kwe-HTML5. Isisombululo sabo esisekwe lilifu sibonelela ngeqonga lokwenza ubuqu elivaliweyo elenza abathengi ukuba bahlule abasebenzisi ngokubhekisele kwimisebenzi yokwenyani yangaphakathi nohlelo kunye nokuhambisa imikhankaso yentengiso ekujoliswe kuyo kunye nokuqikelela. I-Localytics Mobile App Analytics ibandakanya: Iideshibhodi zivumela abathengi ukuba bahlalutye isimilo somsebenzi esibalulekileyo, kanye njengokuba zisenzeka kulawulo lweFunnel luvumela abathengi ukuba basebenzise idatha ukukhuthaza ithemba